lundi, 13 mars 2017 13:53
Miandrivazo : Ritra ny reniranon’i Mahajilo
Maina ny andro aty amin’ny faritry Betsiriry dia i Miandrivazo sy ny manodidina, ritra hatramin’ny reniranon’i Mahajilo. Makiana ny tany, manaraka izany koa ny fambolen’ny tantsaha.
lundi, 13 mars 2017 13:42
Feramanga : maty ny kamiao mitondra fanampiana
Re tamin'ireo iraka anatitra ny fanampiana aty Ambatondrazaka fa dia maty ao Feramanga ny kamiao nalefan'ny BNGRC hitondra ny fanampiana.
Efa tsy matoky intsony ny vahoaka fa toa mampatsiahy ilay hoe tsy delestazy intsony izao fa kopira.
lundi, 13 mars 2017 13:27
Ambohitsilaozana - Ambatondrazaka: Nampanantena fanampiana ny Filoha
Io maraina io dia nidina tamin'ny helicoptère teto Ambohitsilaozana ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny minisitra Rivo Rakotovao.
Niandry ny fanampiana manoloana ny rivodoza ENAWO moa ireto vahoaka nitsena azy ireto, nefa dia fampanantenana no voadalana nentin'izy ireo.
Maro moa ny nomonomonona hoe nahoana no tonga andatsa aty miaraka amin'ity angidimby lafovidy ity raha tapa-mofo aza tsy zaka?
lundi, 13 mars 2017 13:03
Antalaha: Allo, nankaiza ny pilote?
Efa tara vao tonga ny governemanta raha ndeha anatitra fampanantenana fanampiana ho an'ny traboina taty Antalaha.
Tsy nisy nikarakara ity pilote nanamory ny fiaramanidina ka tsy nisy sakafo, dia mba lasa koa izy nitady sakafo, ka efa tonga ireo mpikambana ao amin'ny governemanta nefa tsy hita ny pilote ka mba anjaran'izy ireo indray no niandry.
lundi, 13 mars 2017 12:46
Antalaha: Niandry vasoka ka dia natsipy ny kiravaty manga
Ny zoma 10 mars, dia niandry ny mpikambana ao amin'ny governemanta notarihan'ny praiminisitra ireto manampahefana taty an-toerana.
Tokony ho tonga tamin'ny 9ora maraina ny fiaramanidina roa nofaina manokana, 5RMGL sy 5RMGJ, nefa ny andro nafana, ka dia nanomboka nanendaka ny kiravaty manga avokoa ireo mpitsena.
Tonga ihany ireto vahiny tamin'ny 11ora atoandro, ary dia samy nitintina ny entakeliny avokoa, fa tsy nisy nitondra voandalana.
Nifampijery ny rehetra hoe, niaraka tamin'ny hélicoptère nentin'ny Filoha izay hipetraka eo amin'ny stade municipal ve izay fanampiana ny traboina?
Indrisy fa fampanantenana ihany koa no novimbinin'ny filoha.
lundi, 13 mars 2017 12:08
Antalaha : 8.000 Ar ny litatry ny solika, 1000 Ar ny kapoakam-bary
Midangana ny vidim-piainana ary manjaka ny fanararaotana eto Antalaha taorian’ny rivodoza Enawo. Any amin’ny varomaizina vao mahita solika, ary dia sandaina 8.000 Ariary amin’izao ny litatra, tsy ahitana eny amin’ireo toby mpaninjara solika.
Tafakatra 1000 Ar ihany koa amin’izao ny kapoakam-bary. Sahirana ny Vahoaka manoloana izany, ny fanarenana ny simba taorian’ny rivodoza nefa tsy maintsy atrehina.
lundi, 13 mars 2017 12:07
Maromandia – Analalava : Migadra sa tsia ny Ben’ny tanàna ?
Raha ny didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana ambony Mahajanga ny 5 desambra 2016 dia voaheloka higadra an-tranomaizina herintaona sazy mihatra miampy onitra 2 hetsy Ariary i Samsidine dit Sams, Ben’ny tanànan’i Maromandia, Distrikan’Analalava.
Mametra-panontaniana anefa ny mponina any an-toerana hoe : mihatra sa tsia io didy io ? Misy milaza fa mbola mahita ny Ben'ny tanàna miriaria. Tsy faly amin’izany ny vahoaka hany ka nofantsihin’izy ireo ny biraon’ny Ben’ny tanàna.
Vono sy fandratrana nihatra tamin’i Jaovory Séraphin, ka nitarika fahafatesan’ity farany no nahavoarohirohy an’i Samsidine, ka nanamelohan’ny Fitsarana azy.
lundi, 13 mars 2017 11:20
Nanofo fiaramanidina roa ny governemanta notarihan'ny praiminisitra ary nandeha hélicoptère manokana ny filoha Rajaonarimampianina ny 10 marsa lasa teo.
Akory ny hagagan'ireto traboina izay voa mafy tokoa, fa na tapa-mofo iray aza tsy noentin'ireto delegasionina mafonja ireto, fa dia fampanantenana sy fanentanana hoe hiara-hiasa isika hanarina ny tanàna no ambetitenin'ireto nantenaina hanampy ireto vahoaka ripaky ENAWO ireto.
Nahatezitra ny maro teo aza moa ny fanasan'ny filoha ny tanany tamin'ny alcool teo imasom-bahoaka rehefa avy nandray tanana ireto vahoaka ireto izy.
lundi, 13 mars 2017 10:49
ITB Berlin 2017 : Les opérateurs malagasy à l'assaut du marché allemand
Une forte délégation Malagasy composée des représentants de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et de quelques opérateurs Malagasy à l'instar d'Air Madagascar, ont participé au Salon international du tourisme de Berlin (ITB), qui s'est tenu du 08 au 12 mars 2017.
Ce déplacement dans la capitale allemande avait pour objectif de présenter les atouts touristiques majeurs de la Grande île aux professionnels du tourisme et entre dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie marketing de la destination. Plusieurs évènements ont été ainsi organisés dans le cadre d'ITB, entre autres la conférence de presse qui a eu lieu le 8 mars dernier et à laquelle une vingtaine de journalistes ont pris part. Les nouveautés sur la destination leur ont été présentées.
lundi, 13 mars 2017 10:46
67ha : Mitaintaina ny mponina fa lasan’ny Karana ny tany
Fianakaviana aman-jatony monina amin’ireo tanàna miorina ao ambadiky ny fiantsonan’ny taxi-be, eo ampitan’ny tranom-piatohana Ny Havana etsy amin’ny 67ha, no mandry andriran’antsy ankehitriny taorian’ny feo mandeha fa nisy nivarotra amin’ny Karana ny tany nonenan’izy ireo efa amam-polo taonany.
Trano tsotra manodidina ny 90 tafo eo, ao amin’ny Fokontany AFA sy Fokontany FMAi, Boriborintany Voalohany-Antananarivo Renivohitra no mety ho voakasiky ny fandravana. Misy amin’ireo fianakaviana no efa nahavita “borne” ny taniny, saingy maro ihany koa no tsy mbola nanao ny azy.